नेकपा सचिवालय बैठक आज अपरान्ह बस्दै, के विषयमा हुँदैछ छलफल ? - समय-समाचार
नेकपा सचिवालय बैठक आज अपरान्ह बस्दै, के विषयमा हुँदैछ छलफल ?
१७ आश्विन २०७७, शनिबार १०:३६
काठमाडौं, असाेज १७ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अपरान्ह ४ बजे बैठक बस्न लागेको हो।
अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शुक्रबार भएको भेटमा आजका लागि सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो ।
बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक नियुक्ति र पार्टीको संगठनात्मक एकता टुंग्याउने विषयमा नै छलफल हुने बताइएको छ ।
तर, विशेषगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक नियकामा नियुक्ति लगायतको विषयमा अध्यक्षद्वयबीच अझै पनि सहमति बन्न सकेको छैन ।
बैठकमा सरकारले बिहीबार गरेका राजदूत नियुक्तिबारे सचिवालय सदस्यहरुले प्रश्न उठाउने भएका छन् ।
विशेषगरी अमेरिकाका र बेलायतका राजदूत सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग सल्लाह नगरी एकलौटी गरेको भन्दै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाको राजदूतमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र बेलायतको राजदूतमा पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सिफारिस गरेपछि नेकपाका नेताहरु फेरि आलोचनामा उत्रिएका हुन् ।
गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने र पार्टी कामको नियमित नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, दुबै अध्यक्षहरुबीच एकअर्काको काममा सल्लाह र समझदारीपूर्वक गर्ने निर्णय भएको थियो ।
राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्दा आफुहरुलाई थाहा नदिइएको नेताहरुले गुनासो गरेका छन् । आजसको सचिवालय बैठकमा यिनै गुनासो पोखिने देखिएको छ ।
यसअघि बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष र महासचिवलाई पार्टीको संगठनात्मक एकता टुंग्याउनका लागि १० दिनको जिम्मा दिइएको थियो ।
तर, अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड आफु निकटका मान्छेलाई मन्त्रीमा जोगाउने र थपाउने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पार्टीको संगठनात्मक काम भने फेरि पनि अलपत्र नै परेको छ ।
संवैधानिक निकायमा भागवण्डा मिलाउने काममा मात्रै नेतृत्वको दिमाग घुम्दा पार्टीलाई जीवन्त राख्न गर्नुपर्ने सांगठनिक सक्रियता ठप्प छ ।